Facebook Pornographic video clip များဖြေရှင်းရန် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » အထွေထွေ , ဖြေရှင်းနည်းများ » Facebook Pornographic video clip များဖြေရှင်းရန်
Facebook Pornographic video clip များဖြေရှင်းရန်
By နေမင်းမောင်4:33 PM1 comment
ကျွန်တော်တို့ Facebook News Feed မှာ ပေါ်လာတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Share လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Porn Video (pornographic video clip) Auto share လုပ်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Click နှိပ်မိပြီဆိုတာနဲ့ (Fake) Flash player Install ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ? Update လုပ်ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Download လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာ နောက်ကို အမြန်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။ ဒါက Facebook Users တော်တော်များများ ကူးစက်ခံနေရတဲ့ Malware တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fake flash player တွေဖြစ်တဲ့ downloader Trojan တွေကို Download မလုပ်မိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကိုလည်း ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် .။ ဒီကောင် ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ စက်မှာရှိတဲ့မည်သည့် Antivirus မဆိုအလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး ဖြုတ်လို့တောင် မရတော့ပဲ အသစ်ပြန်တင်တာနဲ့ စက်က Restart ထိုးထိုး ကျသွားပြီးဘာမှကို လုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်.. အခုအကို တစ်ယောက်ကလဲ မေးထဲတာနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးကိုအောက် မှာပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေလဲ သတိထားစေချင်လို့ အဲ့ဒီအကိုပို့လိုက် Virus ၀င်လာပုံလေးကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ကျနော်မသိတာလေးရှိလို့ မေးချင်လို့ ပါ....ခု ကျနော့စက်ထဲမှာ ဟိုနေ့ facebook က လင့် တခု ကိုသူငယ်ချင်း တယောက်က ပို့ ပေးလို့ဖွင့်လိုက်တာ yotube ထဲရောက်သွားတယ်။ ဒီထဲကလိုပဲ ( Facebook ထဲတွင်း သူငယ်ချင်းဆီကဖြစ်စေ မည်သည့်နေရာက ဖြစ်စေ အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့လာပါက မနှိပ်ကြရန်....... ၄င်းသည် virus ကဲ့သို့ အကယ်၍ နိပ်မိသွားပါကမိမိ စက်တစ်ခုခုဖြစ်သည် သာမကကျန်သော Facebook ထဲမှ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကို သူအလိုလို Auto လိုက်ပို့ သွားမည်ဖြစ်သည်.......​ မနေ့ညက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ window auto shut down (သို့) restart ခဏခဏ ကျပါတယ် Antivirus တွေကိုပါ တစ်ခါထဲ သူက ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ antivirus လဲ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ window original 64 bit ပြန်တင်ရင်လဲ system ဖိုင် တစ်ခုကို virus ကစားလိုက်သောကြောင့် Error 0x80070570 တက်ပီးတော့ window ဆက်တင် လို့မရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Facebook မှ virus လာပုံက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ hi. how are you? Wanna laugh? :):) http://46.185.65.225/100000512​217469 အနီရောင် လင့်ကိုနှိပ် လိုက်တာနဲ့ youtube ကဲ့သို့သော စာမျက်နှာ အားရောက်သွားပီး သင့်ကို Latest Flash Player တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို နှိပ်မိပြီဆိုပါကသင့်စက်ကျွန်တော်ပြောထားသလိုဖြစ်မှာ သေချာ ပါတယ်။
အောက်ကပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ..။ ဒါ U-Tube ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီး Malware
အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Download it from Adoble ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မိမိတို့စက်ထဲကို Virus ကစတင်ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်...မဖြစ်သေးတဲ့သူများ သတိထား သင့်ပါတယ်.. အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မိမိတို့ကွန်ပျုတာမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ Virus ရဲ့မူရင်းအစဖြစ်တဲ့ Facebook ကနေထပ်ပြီး မ၀င်ရောက်နိုင်တော့အောင် Facebook ကိုမိမိစက်ရဲ့ Host ထဲကနေ Delete လုပ်ပါမယ်..Keyboard မှ Windows Logo + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင် Run Box ထဲမှာအောက်က အနီရောင်ကုဒ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
အခုပြောတဲ့ နည်းလမ်းလေးအတိုင်း Window XP , Vista နဲ့ Windows7အားလုံးမှာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင် hosts ကို Double Click ပေးလိုက်ပါ..
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင် Note Pad ကိုရွေးပြီး Ok ပေးလိုက်ပါ..
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Notepad ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရသလို 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server လိုမျိုး Facebook.com ကိုရှာပြီး Delete လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. (example: “127.0.0.1 http://www.facebook.com” ) Delete လုပ်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် Notepad ကိုပြန် Save လိုက်ပါ.. ပြီးရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ကောင်လေး ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Windows Tab Bar ပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး Tab Manager ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..။Keyboard မှ Ctrl + Shift + Esc ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လဲ Tab Manager ပွင့်လာပါလိမ့် မယ်..။ Tab Manager ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် Processes ထဲမှာ fbtre6.exe နဲ့ mstre6.exe ကိုရှာပြီးတွေ့
ပြီဆိုရင် End Processes ပေးလိုက်ပါ..
အပေါ်က အဆင့်အတိုင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Registry Editor ထဲမှာသွားပြီးတော့ ရှင်းပါအုံးမယ်..။ Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ Regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။ ဒါဆိုရင် Registry Editor ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်. .ပြီးရင် HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE >Microsoft > Windows > Current Version > Run အထိအဆင့်ဆင်သွားလိုက်ပါ.. Run ကိုရောက်ပြီဆိုရင် Run ကို Click လိုက် ပါ..ပြီးရင်ညာဘက်မှာ ”systray” ကိုရှာပါ..ပြီးရင် အဲ့ဒီကောင်လေးကို Double Click ပေးလိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် Edit String ဆိုတဲ့ Box လေးပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်..ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ Value Data တန်ဖိုး “c:\_windows\_mstre6.exe” ကို Delete လုပ်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် OK ပြန်ပေးလိုက်ပါ..။ Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။ Value Data တန်ဖိုး က “c:\_windows\_mstre6.exe” နဲ့ “C:\_Windows\_fbtre6.exe” လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ Virus မရှိတဲ့အတွက် ”systray” ဆိုတာပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး. လိုက်လုပ်က လွယ်အောင်ပုံလေးတွေနဲ့နမူနာပြပေး ထားတာပါ.. ဆက်ပြီးတော့ Registry Editor ကိုပိတ်ပြီးလို့ Restart ချမှာလားလို့မေးရင် Restart မချပါနဲ့အုံး..။ C:\_\_Windows\_\_fbtre6.exe နဲ့ C:\_\_Window \_\_fmark2.dat File တွေကို Registry Editor ထဲမှာ Delete လုပ်ပေးရပါအုံးမယ်..။ ဒီ Registry Key တွေကို Delete မလုပ်ခင် Backup လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်.. ဒါမှမှားဖျက်မိတာတွေဘာတွေရှိတယ် ဆိုရင်အလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့Import လုပ်ပေးယုံနဲ့အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..။ Backup ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိတော့အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်..
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Registry Key တွေကို Backup ဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Key တွေကို Delete လုပ်ပါမယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ Registry Editor ကိုဖွင့်လိုက်ပါ...ပြီးရင် Keyboard မှ Ctrl + F ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. Find ဆိုပြီး Box လေးကျလာရင် Find watch ထဲမှာ C:\_\_Windows\_\_fbtre6.exe နဲ့ C:\_\_Windows\_\_fmark2.dat ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်ပါ. .တွေ့ပြီ ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လို Delete လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်.. တကယ်လို့မိမိမှားဖျက်မိလို့စက်က Registry ပိုင်းမှာ Error တစ်ခုခုတက်ပြီဆိုရင်လဲ စောစောက Backup လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကို export အပေါ်မှာရှိတဲ့ import ကနေရွေးပြီးပြန်ထည့်ပေး လိုက်ယုံပါပဲ..။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင်တော့မိမိတို့ကွန်ပျုတာကို Restart ချပေးလိုက်ပါ..။
Windows ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စက်ကို C-cleaner လေးသုံးပြီးတော့ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ပန်းချစ်​သူ June 11, 2017 at 11:33 PM
iPhone Data Recovery 3.1
Remo Recover Windows 4.0 ( Full )
Icare Data Recovery 7.9 Full Version